Anyị Brazilian Deep Wave Hair rufe bụ ihe mgbakwunye ntutu na - amaghị nwoke a na - agbanwebeghị. Ihe ndị a na-ewu ntutu isi ndị Malaysia dị mma n'ihi ya na cuticles & ntutu isi dị ike! Ntutu isi ahụ ga-adịgide ihe dị ka afọ 2 site na nlekọta kwesịrị ekwesị.
Nlekọta dị nta, akụkọ, na nke na-ewu ewu, Mgbatị ntutu ntutu anyị nke ndị Brazil bụ ụdị ntutu anyị na-ewu ewu. Ọ dị mfe ịke, na-ejikwa agba agba nke ọma, ma nwee nnukwu curl karịsịa maka ọdịdị mmezi dị ala!
Ọkpụkpụ anaghị acha ọcha (jụọ ajụjụ gbasara ịcha ọcha)
Ejiri ya na swiss lace